Muuri News Network » DAAWO:Video Shariif Xasan iyoTaliyaha ciidamada Itoobiya ayaa furay Kulan Looga Hadlayay Ammaanka Gobalada K/galbeed..
DAAWO:Video Shariif Xasan iyoTaliyaha ciidamada Itoobiya ayaa furay Kulan Looga Hadlayay Ammaanka Gobalada K/galbeed..
Magaalada Baydhaba ee xarunta gobalka Baay, waxaa ka dhacay kullan ballaaran oo looga hadlayay ammaanka guud ee gobalada Koonfur Galbeed, kaasi oo ay ka qeybgaleen xubno dhowr ah.
Kulankaan waxaa wada yeeshay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, Xildhibaanno ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya, Saraakiil ka tirsan ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa ka socday Dowladda Itoobiya, iyo Waxgaradka Koonfur Galbeed.
Taliyaha ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobalka Baay oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in muhiim ay tahay ka wada qeybqaadashada ammanka guud ee Seddax gobal, loogana bahan yahay maamulka Koonfur Galbeed ciidamo tababar loo siiyo.
Ugu dambeyn waxaa kulankaasi ka hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo sheegay in Waxgaradka gobaladaasi looga baahan yahay inay keenaan dhalinyaro ciidamada amniga loo tababaro, si loo helo amni iyo kala dambeyn.
Waxa uu Shariif Xasan kula dardaarmay guud ahaan shacabka Seddaxaasi gobal deggan inay meel uga soo wada jeestaan cid walba oo carqalad ku ah amniga guud ee gobalada Baay, Bakool iyo Shabellaha Hoose.